China Z-LION ingxenye yebhokisi eliphindwe kabili le-trapezoid ukhonkolo wokugaya amapuleti abakhiqizi nabaphakeli |Idayimane ye-ZL
Inombolo yamasegimenti: 2
I-Grit:6#,16#,30#, 50#, 70#, 100#, 120#, 200#, 400#
Ibhondi:Ithambile kakhulu, ithambile kakhulu, ithambile, imaphakathi, iqinile, ilukhuni kakhulu futhi ilukhuni kakhulu
Uxhumano:3-M6 izimbobo noma 3-D9mm izimbobo
Lokhuipuleti lokugaya ukhonkoloisesimweni esijwayelekile se-trapezoid.Ingafakwa ezinhlobonhlobo zemishini yokugaya yaphansi ngezimbobo ezi-3 epuleti le-trapezoid.Izimbobo ezi-3 zingacutshungulwa i-M6 ukuze zifane nezigayi zaphansi njenge-STI, SASE, njll. noma i-D9mm engenalutho ukuze ifane nezigayi zesiShayina ezifana ne-ASL, i-Xingyi, njll.
Lelipuleti lokugaya likakhonkolo linezingxenye ezi-2 ngesimo sebhokisi.Amasegimenti ekuphakameni okungu-13mm ukuze agaye ngokushesha futhi ahlale isikhathi eside.
Lelipuleti lokugaya likakhonkolo lisetshenziswa kakhulu ukulinganisa nokugaya ukhonkolo.Ingakwazi ukuvula indawo endala futhi iveze ukhonkolo omusha ngokushesha.Ama-grits ama-coarse angaphinda asuse izimbotshana ezincane nakuba zinamandla kune-PCD.
Le trapezoid yokugaya ukhonkolo itholakala nge-super soft, soft extra, soft, medium, hard, extra hard, super hard bond.Igrits etholakalayo 6#, 16#, 30#, 50#, 70#, 100#, 120#, 200#, 400#.
Upende onekhodi enombala ukuze kubonakale kalula izinombolo zegrit noma ubulukhuni bebhondi.
Ingasetshenziswa kokubili okumanzi nokomile nakuba ukusetshenziswa okumanzi kunconywa.
Ingxenye yebhokisi eliphindwe kabili le-Z-LION amapuleti okugaya ukhonkolo we-trapezoid asetshenziswa kabanzi ukulungisa ukhonkolo waphansi.Kungelinye lamathuluzi okugaya endabuko futhi adumile embonini yokupholisha phansi kukakhonkolo.Izici ezikhethekile zaleli thuluzi zimi kanje:
Amadayimane ezinga lemboni ahlolwe ngokuqinile futhi axutshwe nezimpushana zensimbi ngokulinganayo ukuze afinyelele umphumela wokugaya osheshayo futhi oshelelayo yonke indlela aze aguge.
Amasegimenti edayimane acindezelwe ngokushisayo futhi ashiselwe ngobungcweti epuleti le-trapezoid.Ukugxiliswa kwedayimane okunengqondo nokushisela okuphrofeshinali kusiza ukunweba isikhathi eside sethuluzi lokugaya.
Izinhlobonhlobo eziningi zamabhondi nama-grits ayatholakala.Inombolo yezingxenye zedayimane zingashintshwa ngokuvumelana nesisindo somshini wokugaya.Ingxenye eyodwa yemishini enesisindo esincane kanye nengxenye ephindwe kabili yemishini esindayo.
Ukuma kwezingxenye kungashintshwa ukuze kube unxande, nxazonke, i-rhombus, umcibisholo njll.
Umumo ojwayelekile we-trapezoid kulula ukufakwa kuma-adaptha azibuthe okushintsha ngokushesha okwenza ithuluzi likwazi ukusetshenziswa kwezinye izigayi zaphansi ezidumile njenge-HTC, Husqvarna, Lavina, scanmaskin, njll.
Inombolo yamasegimenti 2
Ithambile kakhulu, ithambile kakhulu, ithambile, imaphakathi, iqinile, ilukhuni kakhulu futhi ilukhuni kakhulu
I-grit 6#,16#,30#, 50#, 70#, 100#, 120#, 200#, 400#
Ukuxhumana 3-M6 izimbobo noma 3-D9mm izimbobo
Isetshenziselwa kakhulu ukulungiswa kwendawo yaphansi nokubuyisela.Ilungele ukulinganisa indawo kanye nokugaya kokuqala kukakhonkolo kanye nephansi le-terrazzo.Ama-grits ama-coarse angasetshenziselwa ukususwa kwe-coating encane.
Okwedlule: Ithuluzi lokugaya ukhonkolo le-PCD lemishini yokugaya phansi ye-Lavina
Olandelayo: I-Z-LION ingxenye ye-rhombus ephindwe kabili ye-trapezoid amathuluzi okugaya ukhonkolo
Ibha yensimbi ephindwe kabili ye-dovetail yokugaya idayimane...
Metal bond double bar diamond grinding plate f...
Ibhondi yensimbi ephindwe kabili i-rhombus wing plate diamond gr...
Metal bond 10 ingxenye diamond ukugaya puck for...
I-Universal metal grinding disc enamabha ama-4 segmen...
8 ingxenye yedayimane yokugaya puck ene-Terrco bol...